कोरोना भ्याक्सिन लगाएपछि देखिने यी समस्याबाट कसरी बच्ने ? « Mero LifeStyle
कोरोना भ्याक्सिन लगाएपछि देखिने यी समस्याबाट कसरी बच्ने ?
सुमित्रा लुईंटेल	|| 11 June, 2021
माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विश्वभर खोप अभियान चलिरहेको छ । नेपालमा पनि कोरोनाको पहिलो र दोश्रो डोज गरेर करिव २२ लाख मानिसले खोप लगाइसकेका छन् । त्यसमध्ये ७ लाख मानिसले खोपको दोश्रो डोज समेत लगाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन् । नेपालमा हालसम्म कोरोना खोपपछि त्यसले निम्त्याएको डरलाग्दो असर नरहेको उनको भनाइ छ ।
कोरोना भ्याक्सिन लगाएकालाई कुनै समस्या नै नहुने भन्ने हुँदैन । एलर्जी, रगत जम्ने, ज्यान दुख्ने जस्ता सामान्य समस्याहरु देखिन सक्छन् । यी समस्या दीर्घकालीन भए भने हामीलाई नराम्रो असर गर्छ । यस्ता असरहरु केही समयभित्रमा आफैँ हराएर गएन भनेँ डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा.शेरबहादुर पुन बताउँछन् ।
‘कोरोना खोप लगाएपछि ठूलो समस्या आउने र एक पछि अर्को मृत्यु भएको भए त कोरोना खोप लगाउनै बन्द गरिन्थ्यो’, डा. पुनले भने, ‘कोरोना खोप लगाईसकेपछि पूर्ण रुपमा सुरक्षित भइन्छ र कोरोना लाग्दैन भन्ने चाहीँ हुँदैन, तर खोपले केही हदसम्म सुरक्षित गराउँछ ।’
बेलायतमा कोरोना भ्याक्सीन लगाएका केही मानिसमा रगत जम्ने समस्या आएको आएको भए पनि नेपालमा त्यस्तो कुनै गम्भीर समस्या नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
आफूले नियालेका संक्रमितहरुमा कोरोना खोप नलगाएका बिरामीहरु भन्दा एक डोज खोप लगाएकाहरु अलि छिटो निको भएको डा. पुनले बताए ।
त्यस्तै कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिहरुमा खोपले कुनै पनि समस्या नदेखाएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा.अनुप सुवेदी बताउँछन् ।
‘सामान्य ज्यान दुख्ने र ज्वरो आउने समस्याहरु कसैकसैलाई देखिन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘विषेश गरी पहिलो डोज लगाउँदा धेरै जनालाई ज्यान दुख्ने, ज्वरो आउने भएको थियो तर दोस्रो डोज लगाउँदा एकदम कमलाई मात्र त्यस्तो समस्या भएको पाएका छौँ ।’
कोरोना खोप लगाए पछि हुनसक्ने असर ? र बच्ने उपायः
-खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने ।
-सुन्निएको जस्तो हुने ।
-टाउको दुख्ने र कसैकसैलाई ज्वरो आउने ।
-शरीर दुख्ने हुनसक्छ । यस्ता असर देखिए सिटामोलको सेवन गर्न सकिन्छ ।
-यदि कसैलाई एलर्जी भयो भने गम्भीर प्रवितिको असर हुनसक्छ । त्यसैले सबैले खोप लगाएपछि थोरैमा आधा घण्टा खोप लगाएकै स्थानमा बस्नुपर्छ ।
-कसैलाई खोप लगाउने बित्तिकै सास फेर्न गाह्रो भयो रिँगटा लाग्यो वा अन्य प्रकारको समस्या भयो भने नजिकै स्वस्थकर्मीहरुको सल्लाह लिनुपर्छ ।
-खोप लगाउनु भन्दा पहिले आफ्नो शारीरक स्वास्थ्य अवस्थाबारेमा चिकित्सँग परामर्श गरेर खोप लगाउनुपर्छ ।
-खोप लगाइसकेपछि आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यमा अनुकुल प्रतिक्रिया देखाउँछ कि प्रतिकुल भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।